Umshini opholile Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Umshini opholile Factory
Ukudla okuphekiwe Umshini opholile
Incazelo emfushane ye-Ready Vacuum Cooler
Ubuchwepheshe bususelwa esimweni sokuthi amanzi aqala ukubila emazingeni aphansi okushisa njengoba ingcindezi incipha. Ku-vacuum cooler ingcindezi yehliselwa ezingeni lapho amanzi aqala khona ukubila.Inqubo yokubilisa isusa ukushisa ekudleni. Njengomphumela, ukudla kungapholiswa phansi ngokunciphisa ingcindezi egumbini lokuhlanza.
Ngale ndlela, ukudla okuphekiwe kungapholiswa kusuka ekushiseni okuphezulu kuye cishe ku-10 ℃ kungakapheli ama-20 ~ 30min, ukudla okubhakiwe kungapholiswa kusuka ekushiseni okuphezulu kuye ku-20 ℃ kuya kokufanelekile okuhlanganisiwe ngaphakathi kwe-10-20min.
Izithako Zomshini Opholile
Incazelo Yokupholisa Umshini
Ukupholisa i-vacuum kuyindlela ekahle yokupholisa ama-compost athile, esebenza ngokuhwamuka okusheshayo kwamanzi avela kumquba othile ngaphansi kwengcindezi ephansi kakhulu yomkhathi ngaphakathi kwegumbi elinomshini. Kudingeka amandla ngendlela yokushisa ukushintsha amanzi asuke kuketshezi abe isimo somphunga njengasekubiliseni kwamanzi. Ekunciphiseni kwengcindezi yasemkhathini egumbini elinomshini amanzi abilayo ngamazinga okushisa aphansi kunokujwayelekile.
Izimbali Umshini opholile
Ukupholisa i-vacuum kuyindlela ekahle yokupholisa imbali ethile esikiwe, esebenza ngokuhwamuka okusheshayo kwamanzi avela ezimbali ezithile ngaphansi kwengcindezi ephansi kakhulu yomkhathi ngaphakathi kwegumbi elinomshini. Kudingeka amandla ngendlela yokushisa ukushintsha amanzi asuke kuketshezi abe isimo somphunga njengasekubiliseni kwamanzi. Ekunciphiseni kwengcindezi yasemkhathini egumbini elinomshini amanzi abilayo ngamazinga okushisa aphansi kunokujwayelekile.
Amakhambi Umshini Cooler
Ukupholisa umshini kuyindlela ekahle yokupholisa amakhambi athile, kusebenza ngokuhwamuka okusheshayo kwamanzi avela kumakhambi athile namajuba ngaphansi kwengcindezi ephansi kakhulu yomkhathi ngaphakathi kwegumbi elinomshini. Kudingeka amandla ngendlela yokushisa ukushintsha amanzi asuke kuketshezi abe isimo somphunga njengasekubiliseni kwamanzi. Ekunciphiseni kwengcindezi yasemkhathini egumbini elinomshini amanzi abilayo ngamazinga okushisa aphansi kunokujwayelekile.
Amakhowe Okupholisa Umshini
Ukupholisa umshini kuyindlela ekahle yokupholisa amakhowe athile, kusebenza ngokuhwamuka okusheshayo kwamanzi avela kumakhowe athile ngaphansi kwengcindezi ephansi kakhulu yomkhathi ngaphakathi kwegumbi elinomshini. Kudingeka amandla ngendlela yokushisa ukushintsha amanzi asuke kuketshezi abe isimo somphunga njengasekubiliseni kwamanzi. Ekunciphiseni kwengcindezi yasemkhathini egumbini elinomshini amanzi abilayo ngamazinga okushisa aphansi kunokujwayelekile.
Ama-Turfs Umshini Opholile
Ukupholisa i-vacuum kuyindlela ekahle yokupholisa ama-turf athile, kusebenza ngokuhwamuka okusheshayo kwamanzi kusuka kuma-turfs athile ngaphansi kwengcindezi ephansi kakhulu yomkhathi ngaphakathi kwegumbi elinomshini. Kudingeka amandla ngendlela yokushisa ukushintsha amanzi asuke kuketshezi abe isimo somphunga njengasekubiliseni kwamanzi. Ekunciphiseni kwengcindezi yasemkhathini egumbini elinomshini amanzi abilayo ngamazinga okushisa aphansi kunokujwayelekile.
I-Bakery vacuum cooler
Yini Ukupholisa Umshini?
Isinyathelo 1.Vaporizing umswakama ovela ngaphakathi komkhiqizo.
Isinyathelo 2: Kususa amandla ngendlela yokushisa kusuka ekukhiqizeni okusha.
Isinyathelo 3.Yenza indawo nengqikithi yomkhiqizo ifinyelele ngqo kuleso
ukushisa okufanayo ngemuva kokupholisa komshini.
Okupholile Ukudla Umshini Cooler
Incazelo emfushane ye-Steam Food Vacuum Cooler
Okupholile Inyama Umshini Cooler
Umshini Cooler ubuchwepheshe bokupholisa ukupholisa ngokushesha. Yehlisa ingcindezi yegumbi ngokupompa i-vacuum ukuze iphoyinti lokubilisa lamanzi emikhiqizweni lehliswe ukuze amanzi aphefumulelwe ukumunca ukushisa kwemikhiqizo uqobo, bese ukwehlisa imikhiqizo '
izinga lokushisa ngokushesha. Kunezinzuzo eziningi ngaphezu kokupholisa kwendabuko nokupholisa endlini yesiqandisi.
Imifino cleaner kupholile
umshini wokupholisa umshini uhlukile kwimishini yesiqandisi ejwayelekile, iyisetshenziswa esipholile sokucubungula, esinenzuzo esheshayo, efanayo futhi ehlanzekile yokupholisa. Ukwehliswa kwethempelesha nge-vacuum cooler kutholakala ngokuhwamuka kwamanzi ngokushesha lapho ingcindezi yomoya ngaphakathi kwegumbi yehliswa yipompo yokupaka. Ngokuvamile, kuthatha imizuzu engama-30 kuphela ukufinyelela izinga lokushisa elikhulu lesitoreji cishe ngama-degree ama-5.